Malunga Nathi-eMntla&HUSBANDRY Machinery (QZ) Co., Ltd.
Iinxalenye zeNkqubo yokuSondla
Indlu eyakhiwe ngaphambili
Inkampani yaseNorth Husbandry Machinery ngumenzi ochaza umoya wokuphefumla kunye nezixhobo zokupholisa. Ukubonelela ngeyona ndlela ilungileyo yokungena komoya kwiifama zeenkukhu. Ukuvelisa olona mgangatho uphezulu wabalandeli bokukhupha, iipads zokupholisa kunye naziphi na ezinye izixhobo zomthengi wethu ngokusebenzisa umatshini kunye nobuchwepheshe obuphambili. .Njengokuqala kwezenzululwazi, sithatha indlela yezenzululwazi,ingcamango yesayensi,ulawulo lobuchwephesha, ukwenzela ukukhuthaza uphuhliso olukhawulezayo lwemfuyo.
Inkampani yaseNorth Husbandry Machinery yangenisa izixhobo ezitsha zemveliso yesistim yokupholisa ngo-2007, ifikelela kumaxesha amaninzi emalinge nezifundo, ekugqibeleni yaphumelela kwaye yaqalisa ukuvelisa iindidi ezahlukeneyo zeephedi zokupholisa eJane, ngo-2007.
Ngo-2013, inkampani yethu yangenisa i-Automatic CNC stamping, ukugoba okuphezulu kwe-CNC kunye nezinye izixhobo zokusebenza ze-hardware. Ngelo xesha, saqala ukuvelisa abalandeli be-exhaust efana ne-systerm efana ne-cool pads, kwaye kukwakho ukutya kweenkukhu. Iimveliso zenkqubo.Fan yohlobo lweHammer, Tsala kwaye utyhale i-fan, kunye nothotho lwabalandeli abakhulu bokuphuma baziwa ngempumelelo njengabathengi abavela kwihlabathi liphela, ngendlela esaqala ngayo ukwamkela iiodolo ezivela ngaphandle kwelizwe.
Ngo-2016, Senze umsebenzi omhle wokuphanda abalandeli bakaTsalo kunye nePush Cone kwaye ekugqibeleni sayifumana. Umthengi wamkelwa ngokulula kwaye uyayithanda nzulu emva kweminyaka emibini yokuphucula amava. Okwangoku, inkampani yethu ineendidi ezingaphezulu kwamashumi amathandathu zeemveliso ezifana neFani yokuTsalisa kunye nokutyhala icone, iHammer cone fan,Ibhabhathane yekowuni yomlandeli Tsala kwaye utyhale ifeni, iHammer fan, ifeni ejingayo,Iphedi yokupholisa eBrown, icala elinye lephedi yokupholisa emnyama, eluhlaza kunye tyheli, inkqubo yolawulo lokusingqongileyo, izixhobo zokutyisa ipani yenkukhu, isiselo sengono, iiNkukhu ezikhejiweyo, iCages Feeder, iSilo, njalo njalo.
Inkampani yethu igxininisa ukuba umbono woMthengi uphezulu, ngokunyaniseka nokuzibophelela.Win umthengi ngomgangatho ophezulu kunye nokubuyisela umthengi ngeyona nkonzo ilungileyo.
Ngomgaqo wethu womgangatho wemveliso, sithatha isheke elibukhali lokukhetha izinto ezigxininise kwi-275g kwiphepha elifakwe i-galvanized ukukhusela i-rust.Kwaye sihlawula ingqalelo ngakumbi nangakumbi kuyo yonke inkqubela yokuvelisa ukwenzela ukuba inokunciphisa umonakalo womphezulu.
Sikwazama kangangoko ukuphepha ukuthumela naziphi na iimveliso ezineziphene.
1. 24 iyure emgceni. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki, ungaqhagamshelana nam nangaliphi na ixesha.
Inkonzo ye-2.Good emva kwentengiso. Kwaye naziphi na iinxalenye zefeni yokukhupha ayisebenzi kwiwaranti (umonakalo ongengowokwenziwa), siyakukuthumela kwakhona kwangoko.
3. Singakubonisa itekhnoloji yeefeni ezahlukeneyo zokukhupha kwindlu yeenkukhu ukuba awunamava.
Yonke into oyifunayo ukwenza iwebhusayithi entle
I-imeyile : sales@northhusbandry.com
Uhlaziyo lweFine Fine yaseAfrika: Ukuqala kwe ...
Greenhouse Cooling Pad, Iinkukhu zokutyisa inkqubo, inkqubo yokondla indlu yeenkukhu, I-Evaporative Cooling Pad, inkukhu feeder, umphakeli wehagu,